Global Voices teny Malagasy » Mikatona Noho ny Teritery Ara-politika ny Tranomboky Eny Ambanivohitra Tantanin’Olon-tsotra Ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Oktobra 2014 17:56 GMT 1	 · Mpanoratra Gloria Wong Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Kanefa tsy ankasitrahan'ireo manampahefana Shinoa loatra ny fisantaran'andraikitra tantanin'olom-pirenena, ary noterena nakatona vao haingana ny tetikasa tranom-boky tsy miankina antsoina hoe China Rural Library (CRL)  noho ny teritery ara-politika.
Nanambara ny fanakatonana ity tetikasa tranom-boky ity tao amin'ny bilaogy madinika malaza Sina Weibo ny CRL tamin'ny 18 septambra 2014, ary namoaka taratasy misokatra manazava ny teritery natrehin'izy ireo. Nalaza tao amin'ny media sosialy Shinoa ilay taratasy ary nosivanin'ny manampahefana avy eo. Namoaka dika mitovy  an'ilay taratasy tao amin'ny Google Plus ny Tranokalam-baovao Tsy Miankina China Digital Times.
Nanambara ny taratasy fa nanomboka nanao teritery tamin'ny tetikasa tranombokin'ny CRL ny Minisiteran'ny Kolontsaina, ny minisiteran'ny fampianarana ary ny biraon'ny polisim-piarovana nanomboka tamin'ny volana Jiona tamin'ity taona ity. Tamin'ny tranga hafa, manafika ireo tranom-boky izay miresaka fivavahana ny manampahefana. Ohatra, noraofina ireo boky momba ny haiamamonina (sosiôlôjia) mahazatra, ny Etika Protestanta sy ny Toetry ny Kapitalisma nosoratan'i Max Weber. Noterena nakatona ihany koa ny sehatra antseraseran'izy ireo itadiavana mpilatsaka an-tsitrapo sy ny magazay fivarotana fahatsiarovana. Tamin'ny volana Septambra, tranomboky 19 manerana ny firenena no noterena nakatona. Nanipika ny  CRL fa “tsy nisy tamin'ireo tranombokiny no nakatona an-tsitrapo noho ny antony tsy fahaiza-mitantana”.
Amin'ny maha-fikambanana mpanao asa soa tsy miditra fivavahana sy ny CRL, nahasarika fanehoan-kevitra maro antserasera ny famoretana manerana ny firenena. Nanome fanazavana  mikasika ny fikatonan'ny CRL tao amin'ny Zhihu, sehatra fanontaniana sy valiny ny mpilatsaka an-tsitrapo teo aloha tao amin'ny CRL:
Mihevitra  ilay mpisera Weibo sy mpanohana ny CRL teo aloha, «Manohy nofy tsy misy” (@ 空空 追梦) fa vokatry ny olana ara-pitantanana fa tsy noho ny teritery ara-poliitika ny fanakatonana:
Nihevitra kosa ilay mpisera Weibo malaza, “ny anganon'ny asa sosialy” (@社工迷思 )” fa avy amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitantanan'ny governemanta sy ny ONG ny olana:
Profesora Taiwaney Shih-Hung Lo, izay nianatra momba ny fampandrosoana ny firaisamonim-pirenena ao Shina Tanibe, nanoratra  tao amin'ny bilaoginy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/17/64982/
 China Rural Library (CRL): http://www.xctsg.org/
 dika mitovy: https://plus.google.com/+%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%97%B6%E4%BB%A3/posts/6Tx7FCDUVjq
 Nanipika ny: http://t2.qpic.cn/mblogpic/6dd19733c607febdd658/460
 Nanome fanazavana: http://www.letscorp.net/archives/76065